Home Wararka Go’aanka maxkamada ee dacwada badda & safarka Rooble maxa ka dhaxeeya?
Go’aanka maxkamada ee dacwada badda & safarka Rooble maxa ka dhaxeeya?
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar ugu amba baxay magaalada Doxa ee dalka Qatar. Safarkaan oo ahaa mid aan horay loo sii oqrsheeyn ayaa ahaa mid dowlada Qatar ugu yeertay Rooble in uu halkaas ku tago safar deg deg.
Rooble ayaa casuumaad ka helay Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamad Al Thani, kaas oo ku casuumay dalkiisa. Safarka Rooble ayaa ku soo beegmayo maalmo ka hor markii ay halkaas ka soo tageen wafdi ka socday dalka Kenya.
Mudo ku siman hal asbuuc ayaa la filayaa in Maxkamada Cadaalada Aduubka in ay go’aan ka gaarto dacwada badda ee u dhaxeeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Dowlada Qatar ayaa in mudo ah qorshaynaysay xal ka baxasan maxkamad laga gaaro dacwada badda.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa inta uu joogo Doha waxa uu kulan la qaadan doonaa Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamiim Bin Hamad Al-Thani iyo Ra’iisul Wasaaraha dalkaas Khalid Bin Khalifa Bin Cabdulcasiis Althani iyo gudi loo saaray dacwada badda Soomaaliya.
MW Jubbaland oo kulan la qaatay Xubana ka socday Qaramada Midoobay
Fiqi: “Wadaadada Wahaabiyiinta waxay bannaysteen dhiigga Ahlusunna”
Jubaland oo gudaha Kismaayo ku qabatay xubno ka tirsan Amniyaadka Al-shabaab
Now Is The Time To Engage Al-Shabaab. Religious Leaders And Clan...